ပင်မ စာမျက်နှာ HP
သမ္မာကျမ်းကို ဖတ်ရှုခြင်း BR
အသံသွင်း သမ္မာကျမ်းစောင် Audio Bible
အသံသွင်း မှတ်တမ်းများ Aud_Arc
ပုံမှန် ပရိုဂရမ် ရေးသားမှု Reg.Prog.
သမ္မာကျမ်းတော်မြတ် လေ့လာရေး ပထမ အခြေခံမူများ fp
အခြေခံ သမ္မာကျမ်းစောင် လေ့လာမှု bbs
သမ္မာကျမ်းတော်မြတ်ထဲက အားတက်ဖွယ် စကားလုံးများ ewb
လှေခါးထစ်များရဲ့ သီချင်း sod
သင့်ကို ဘုရားသခင်ချစ်ပါသလား? DGLY
ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း About us
Family Radio ဆိုတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်?
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် C_us
ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ကမ္ဘာကြီးအား ထုတ်ဖေါ်ကြေညာပေးခြင်း နှင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ ပြည်သူများကို နှစ်သိမ့်ပေးခြင်း
သမ္မာကျမ်းကို ဖတ်ရှုခြင်းသစ္စာတရားကို ရှာရန်
ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်းFamily Radio ဆိုတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်?
[Family Radio]မှ ကြိုဆိုပါတယ်!
သင်က[Family Radio] ကို ဝင်လာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အထူးဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ သင် ဖတ်ရှုရကာ ကြားရတဲ့ အရာတိုင်းဟာ သင့်ကို သင်ကြားပေးရန် နှင့် နှစ်သိမ့်ပေးရန်ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သင်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရေးသားထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖတ်ရှုလိုသလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အသံသွင်း မှတ်တမ်းများကို နားထောင်လိုသလား၊ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ စီစဉ်ပေးထားတာ အားလုံးကို အခမဲ့ သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ၎င်းရဲ့ ပြည်သူများအား အခမဲ့ ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ရေး ဆုလာဘ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြရပါတယ်။ [Family Radio] မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းပေးတဲ့ အရာတိုင်းဟာလည်း အဲဒီအခြေခံမူအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်:…အဘိုးမပေးဘဲ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြပြီဖြစ်၍ အဘိုးမခံဘဲ ပေးကမ်းနေကြပါတယ်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၀၊ ၈။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သင့်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ အရင်းအမြစ်အားလုံးတို့ကို အဘိုးမပေးရဘဲ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုပါ၊ ပြီးတော့ သင်က ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို ဖတ်ကြားစဉ် သို့မဟုတ် ကြားရစဉ် ဘုရားသခင်က သင့်ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ချီးမြှင့်တော်မူနိုင်ပါစေ။
ဘုရားသခင်က ၎င်းရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို အသုံးပြုလျက် သင်ရဲ့ မျက်လုံးများကို သစ္စာတရားဆီသို့ ဖွင့်ပေးမှာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ သင်က ဒီလောကကြီးထဲမှာ သွားလာရင်း ဘုရားသခင်အား လုပ်ကျွေးရာတွင် [Family Radio]ကို နှစ်သိမ့်ပေးသူ နှင့် အားပေးသူ တစ်ဦးဖြစ်လာပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Family Stations, Inc – အကျိုးအမြတ် ရှာဖွေခြင်းမရှိသော ၅၀၁ (c)၃ ကုသိုလ်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်း – © 2014 All လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ထားသည်